Ntụnye maka mmemme n'èzí
site admin na 08-08-2021
Mgbasa ozi n'èzí bụ ụzọ magburu onwe ya isi dọta uche na ngwaahịa, ọrụ na ihe omume gị, mana ụdị ngosi dị na gịnị ka ị ga-achọ na nkwụsị n'èzí? Nke a bụ ndụmọdụ ole na ole gbasara ọkọlọtọ mmemme n'èzí maka gị: Dị ka ihe ngosi n'èzí ga-abụ ...
Mmelite nke ụlọ nkwakọba ihe esenidụt
N'ihi nje na-aga n'ihu n'ụwa niile, ihe niile na-agba ara na enweghị nchịkwa. Ọnụego ibu ibu abawanyela na 2021, ọ na-abawanye ọnụ ahịa ndị na-ebubata mbubata ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Ụzọ ọzọ enweghị arịa zuru ezu iji na-ebu iwu sitere na China mgbe niile, ...
Kedu ọkọlọtọ mgbasa ozi dabara adaba maka azụmahịa gị?
Ọkọlọtọ dị n'èzí bụ ụzọ ewu ewu nke na-adọta uche na igwe mmadụ n'ebe ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ mmemme gị. Mana enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche, otu esi ekpebi ọkọlọtọ nkwado nke ga-arụ ọrụ kacha mma maka azụmahịa gị, Nke a bụ ajụjụ 7 ga-enyere gị aka d...
Wzrods na-eguzo na ndị ahịa mgbe niile
site admin na 17-05-2021
Kemgbe Machị nke afọ 2020, COVID-19 gbasapụrụ ngwa ngwa na Europe na America, ebe ndị ahịa anyị nọ na-emetụtakarị na ọbụna ka akpọchie ya. N'oge ahụ, a na-achịkwa ọnọdụ COVID-19 nke ọma na China na ndị ọkachamara ahụike China nwere…
site admin na 17-06-2020
Lelee ụfọdụ ngwọta azụmaahịa covid-19 sitere na wzrods, anyị nwere olile anya inyere ndị ahịa gị aka ka ha nọgide na-azụ ahịa n'oge nsogbu a.
Ọrụ nkwakọba ihe nke mba ofesi na North America (Dallas, TX) ma ọ bụ EU (Portugal) nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ.
site admin na 17-04-2020
Coronavirus na-agbasa na-enwe mmetụta dị egwu na azụmaahịa, ụzọ ọzọ nkwụsị ntinye akwụkwọ / ịkagbu ụgbọ elu / ọnụ ahịa ibu na-abawanye nke ukwuu, otu esi ebelata ihe egwu na ọnụ ahịa, chebe ego gị wee zute arịrịọ ngwa ngwa sitere n'aka ndị ahịa, ọrụ ụlọ nkwakọba ihe nke mba ofesi. .
Onye nkwado nke MTB
site admin na 17-07-2019
Obi dị anyị ụtọ ịbụ onye nkwado China MTB Open afọ abụọ. wzrods na-enye ihe akara pụrụ iche dị ka ọkọlọtọ mmemme, A-frame iji mee ka ị pụta ìhè na mmemme